Cabdiraxmaan Maadey oo u Goodiyey Gabadha Dr. Maxamed Siraad Dolal! – Rasaasa News
Jan 14, 2010 Maadey, raxaneeb.com, xaajo.comDr.Dolal
Waxaa dhawaan bogga raxanreeb.com iyo boggag kale la soo galiyey qoraal dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo ay qortay Sagal Dolal. Qoraakaas oo ay gabadhu ku sharxayso dilkii Aabaheed oo ay ka soo wareegatay hal sano. Waxayna sheegtay in ay ku daashay helida lafihii Aabaheed iyo dhagarqabayaashii ka dambeeyey, walina ayna hawshaasi fari ka qodnayn.
Qoraalku waxaa uu ku soo beegmay sanad guuradii kowaad, kolkii lagu dilay gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya Aabaheed Dr. Maxamed Sirad Dolal. Dr. Dolal, waxaa uu ahaa udub dhexaadka halganka uu waday ururka ONLF, oo u dagaalama xoreynta dhulka Somalida Ogadeeniya.
In kasta oo uu Dr Dolal ahaa masuuliyiinta ururka ONLF, waxaa uu ku baxay gacanta ururka ONLF ilaa iyo maantana sida ay gabadhiisu sheegtay, lama hayo raqdiisii. Waxaase ay aamisan yihiin dadwynaha Somalida Ogadeeniya iyo qoyska reer Dolal in dilka Dr. Dolal ay ka dambeeyeen afar nin oo ay saaxiibo ahaayeen kuna wada jireen halganka.
Afarta nin, waxay ku nool yihiin dalaka reer galbeedka, wayna og yihiin xantooda iyo waxa ay galeen, sidaasi darteed suurto gal uma aha in ay aadaan geeska afrika, marka laga reebo dalka Eritrea oo ahaa meesha laga soo abaabulay dilkii Dr Dolal.
Hadaba, waxaa nasiib daro weyn ah in iyada oo ay arintu sidaas tahay uu Cabdiraxman Maadey, sida la sheegay uu u hanjabay Sagal Dolal, ka dib markii uu e-malkiisa [google search] u soo qabay warqad dheer oo ay qortay Sagal Dolal, kaas oo ay ku qoran yihiin magacyada afar nin oo uu ka mid yahay Maadey loona haysto in ay ka dambeeyeen dilkii Dr. Dolal.
Tolow maadeey Aabe waynaa oo hooyo kala jiidanaa, awal baa Dr. Dolal loo haystay eeggana ma inantiisii oo kula nool dalka Ingriiska ayuu u buntufanayaa. Hanjabaada laga soo sheegay Maadey, waxay u egg tahay baanid uu Maadey baanayo oo uu leeyahay aniga ayaa Aabahaa dilay adigana waan ku raacin, hadii aadan qoraalada joojinin.
Wararku waxa intaas ku darayaan in Maadey uu qabsaday bogga raxanreeb.com oo ahaa boggii ugu horeeye ee soo daabacay warqada Sagal, wuxuuna ka codsaday in ay ka saaraan wayse ka diideen tafatirayaalka raxanreeb.com.
Maadey waxaa lagu yaqaan kalsoonidarida, cabsida iyo shakiga, waxaa uu awal hore gabaad ka dhiganayey quluxquluda ay haweenku dabaqaadayeen Jwxo-shiil, taas oo mar hore ay fahmeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya in Jwxo-shiil uu ugu talo galay in uu soo xidho ururka Onlf oo uusan waxba ku lahayn, laakiin uu xaday. Maantase Maadey iyo kuwii dambiga la galiyey waabaa ku baryey, ma jirto cid quluxqulux daba qaadaysa, balse qaare ayey dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo dhan la damacsan yihiin in ay ku dilaan, dambiyada ay galeen daraadood.
Hadii uu Maadey ka kululaaday qoraalka Sagal ee uu daabacay raxanreeb.com, waxaanu ku martiqaadaynaa in uu la socdo qoraalo ku saabsan dunuubta uu galay oo aanu ku soo saaridoono rasaas.com.
Qoraalka ka cadheeeyey Maadey ee ay qortay Sagal Dolal, waxaa uu u qoraa sidan ee akhriso.
ka akhriso qoralka Saga raxanreeb.com
The Waraf family statement About the Reaction from the Police and Somali Community in Minneapolis on the Killing.